Multi- ဓာတ်ငွေ့ detector စက်ရုံ - China Multi gas detector ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
စံသတ်မှတ်ခြင်းအမျိုးအစား: CH4 \_ O2 \_ CO \_ H2S \_ CO2 \_ SO2, အပူချိန် ၁။ စွမ်းအားကောင်းသော built-in pump သည်စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းစေသည်။ ၂။ ထူးခြားသောအပူချိန်တိုင်းတာခြင်း 3. မတူညီသောဓာတ်ငွေ့နှင့်အပူချိန်ခြောက်ခုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ လေတိုက်နှုန်း၊ ဖိအားနှင့်စိုထိုင်းဆကိုတိုင်းတာရန်ရွေးချယ်နိုင်သောအာရုံခံကိရိယာများရှိသည်။ 4. တင်သွင်းထားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော sensor ၅။ အပြည့်အ ၀ လိုက်ဖက်သည့် Tianyun TS-CLOUD အလိုအလျောက်စံကိုက်ညှိစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ၆။ ၂၄ နာရီလျင်မြန်စွာတိုင်းတာခြင်းစံချိန် ၇။ မြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် ၈ ။
၁။ အားကောင်းသော built-in pump သည်စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းစေသည်။ ၂။ ထူးခြားသောအပူချိန်တိုင်းတာခြင်း 3. ကွဲပြားသောဓာတ်ငွေ့နှင့်အပူချိန်ခြောက်ခုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ လေတိုက်နှုန်း၊ ဖိအားနှင့်စိုထိုင်းဆကိုတိုင်းတာရန်ရွေးချယ်နိုင်သောအာရုံခံကိရိယာများရှိသည်။ ၄။ တင်သွင်းထားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောအာရုံခံကိရိယာ ၅။ အပြည့်အ ၀ လိုက်ဖက်သည့် Tianyun TS-CLOUD အလိုအလျောက်စံကိုက်ညှိစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ၆။ ၂၄ နာရီလျင်မြန်စွာတိုင်းတာခြင်းမှတ်တမ်း ၇။ ကြည်လင်ပြတ်သားသောမျက်နှာပြင် ၈။ ကြမ်းတမ်းသော polycarbonate shell၊ လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ လက်အိတ် ၁၀ ခုဖြင့်လည်ပတ်ရန်။
ကြိုးမဲ့ Multi-Gas Detector CD4X
Model： CD4X Brand: TOPSKY လျှောက်လွှာ - CD4X ကို CH4 (0-4%)၊ CO2 (0-5%), CO (0-1000ppm), O2 (0-25%) ကိုတစ်ချိန်တည်းစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဤကိရိယာသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများအတွက်ကျောက်မီးသွေးနှင့်ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုများအတွက်သင့်တော်သည်။ သင်ကကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရေးအလုပ်မျက်နှာပေါ်မှာဆွဲထားခြင်းနှင့်ပြန်လာလေကြောင်းလမ်း။ အဓိက Feature: Display Mode: လိုင်းနှစ်ခု၊ ဂဏန်း ၄ လုံး၊ ၂.၃ လက်မအနီရောင်ဒီဂျစ်တယ်ပြွန်၊ မီတာ ၃၀ အတွင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တယ်။ 200-1000Hz ကြိမ်နှုန်းနှင့် RS485 ဝါယာကြိုးဒေတာ ...
အိတ်ဆောင် Multi- ဓာတ်ငွေ့ detector CD4A
အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ - CD4A အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ 1.detect CH4, O2, CO, CO2 2. ၂ နှစ်အာမခံ ၃။ ညှိနိူင်သောနိမ့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောနှိုးစက်သတ်မှတ်ချက်များ 4.Exibd I IP54 အပလီကေးရှင်းများ : CD4 (A) အိတ်ဆောင် multi-gas detector သည်ဘေးကင်းလုံခြုံ။ ပေါက်ကွဲလွယ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဓာတ်ငွေ့များကိုတားဆီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO)၊ အောက်ဆီဂျင် (O2)၊ မီးလောင်ကျွမ်းသောစသည့်လေထုအန္တရာယ်လေးခုအထိတစ်ပြိုင်နက်တည်းစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ - iR119 သည်လက်တွေ့ကျကျကြိုးမဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေတာထုတ်လွှင့်မှုပေါင်းစပ်ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်၊ built-in ကြိုးမဲ့ module module သတိပေးချက်များမှတဆင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုသည်။ အချိန်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်သည့်အခါဓာတ်ငွေ့အာရုံစူးစိုက်မှု gauge လယ်ပြင်တစ်ခုနှိုးဆော်သံ signal ကိုသက်ဝင်။ IR119 တွင်ပရိုဂရမ်းမင်းလုပ်ဆောင်ချက်များရှိပြီးအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များကိုရှာဖွေရန်အာရုံခံကိရိယာတစ်လုံးမှငါးခုအထိအသုံးပြုနိုင်သည်။
VOC မတည်ငြိမ်သောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဓာတ်ငွေ့ detector
အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ - iGas Pro PID VOC အပလီကေးရှင်းများ - iGas Pro PID သည်အဆင့်မြင့် PID နည်းပညာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ i Gas Pro PID VOC သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသေးငယ်ဆုံးသောကိုယ်ပိုင် VOC detector ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအခြေအနေများတွင် VOC အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ စစ်ဆေးခြင်းသည်မြန်၊ ၎င်းသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ရှိသည့်အန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာအီး ...
အိတ်ဆောင် Multi-Gas Detector CD10
အင်္ဂါရပ်များ - တိုင်းတာခြင်းမျိုးသည် ၁၀ မျိုးအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ သင်လေတိုက်နှုန်းကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းမှုအချက်ပြတိုင်းတာနိုင်သည်လေထဲတွင်ပါ ၀ င်သောနမူနာစုပ်စက်သည်နေရာအကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည်။ အစားထိုးနိုင်သောဘက်ထရီ၊ ယင်းသည် ၁၂၀ နာရီကြာနိဒါန်း။ ဓာတ်ငွေ့မီတာ Terminator CD10 ဘက်စုံသုံးသယ်ဆောင်နိုင်သောဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းအချက်ပြသည်အလွန်ဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်သည်။ အိတ်ဆောင်ကိရိယာတိုင်းတာမှုမီတာ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ အောက်စီဂျင်၊ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်၊ လေတိုက်နှုန်း၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ လေထုဖိအားကိုတိုင်းတာသည်။ ကြီးမားသော ၃.၇ -In ...
အိတ်ဆောင် CH4, O2, CO, H2S Multi- ဓာတ်ငွေ့ detector CD4
အသုံးပြုခြင်း - CD4 အိတ်ဆောင် Multi-gas detector သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောကိရိယာဖြစ်ပြီးဓာတ်ငွေ့များကိုတားဆီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO)၊ အောက်စီဂျင် (O2)၊ လောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့ (% LEL) နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက် (H2S) အပါအဝင်လေထုအန္တရာယ်လေးခုအထိတစ်ပြိုင်နက်တည်းစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ကျစ်လစ်ပေါ့ပါးသော CD4 အိတ်ဆောင် Multi-gas detector သည်နိမ့်သောသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအချက်ပြအခြေအနေတွင်ကြားနိုင်၊ အမြင်နှင့်တုန်ခါသည့်နှိုးစက်များကိုသက်ဝင်စေသည်။ CD4 အိတ်ဆောင် multi-gas detector သည် ... \_ t
CTL1000-100 CO & H2S multi gas detector
မော်ဒယ်နံပါတ် CTL1000 / 100 အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းအသိအမှတ်ပြု CO & H2S multigas detector CTL1000 / 100 သည်အခိုင်အမာလုံခြုံပြီးပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျောက်မီးသွေးတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ CO & H2S ကိုရှာဖွေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ, သူကအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစားနှင့်ပေါ့ပါးသောအိတ်ဆောင်ကိုလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်ရန်၎င်း၏ shockproof ဖြင့်၎င်းသည်အကာအကွယ် ပေး၍ အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာမှာအသုံးပြုသည်
CYT25-1000 O2 & CO ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်
မော်ဒယ်နံပါတ်: CYT25 / 1000 အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းလက်မှတ် CYT25 / 1000 O2 & CO ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်သည်အခိုင်အမာလုံခြုံပြီးပေါက်ကွဲလွယ်သောကိရိယာဖြစ်ပြီးကျောက်မီးသွေးတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ O2 & CO ကိုရှာဖွေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ, သူကအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစားနှင့်ပေါ့ပါးသောအိတ်ဆောင်ကိုလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်ရန်၎င်း၏ shockproof ဖြင့်၎င်းသည်အကာအကွယ် ပေး၍ အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ un ...
CJT-4-1000B Methane CH4 & Carbon Monoxide CO ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်
အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်းလက်မှတ်နံပါတ် - CJT-4 / 1000B လျှောက်လွှာများ - CJT-4 / 1000B သယ်ဆောင်နိုင်သော CH4 ＆ CO 1 ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်ရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်တစ်ခုသည်သဘာဝအားဖြင့်လုံခြုံပြီးပေါက်ကွဲလွယ်သောကိရိယာဖြစ်ပြီးဓာတ်ငွေ့များကိုတားဆီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ။ ၎င်းသည်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO)၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ (% LEL) ကိုတစ်ပြိုင်တည်းစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ကျစ်လျစ်ပေါ့ပါးသော CJT-4 / 1000B အိတ်ဆောင် CH4 ＆ CO 1 ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်ရှိအနိမ့်အမြင့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအခြေအနေတွင်အသံနှင့်အမြင်အာရုံအချက်ပြမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
1 ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်အတွက်အိတ်ဆောင် Methane & အောက်စီဂျင်2CH4-O2
အရည်အချင်းများ - ကျောက်မီးသွေးတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်မှတ်ပေါက်ကွဲမှုမရှိသောလက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းလက်မှတ်နံပါတ် - CJYB4 / 25 လျှောက်လွှာများ - CJYB4 / 25 သယ်ဆောင်နိုင်သော CH4 ＆ O2 ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်ရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးကိရိယာသည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးပေါက်ကွဲလွယ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဓာတ်ငွေ့များကိုတားဆီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အောက်ဆီဂျင် (O2)၊ လောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့ (% LEL) ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ကျစ်လျစ်ပေါ့ပါးသော CJYB4 / 25 သယ်ဆောင်နိုင်သော CH4 ＆ O2 ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်တစ်ခုရှိအနိမ့် (သို့) မြင့်မားသောအချက်ပြမှုအခြေအနေတွင်အသံနှင့်အမြင်အာရုံနှိုးစက်များကိုသက်ဝင်စေသည်။ ဂျေ ...